जापान रेल पास, जापान को माध्यम बाट यात्रा को लागी एक टिकट। यस्ले कसरी काम गर्छ? | Absolut यात्रा
जापान रेल पास, जापान मा यात्रा को लागी सबैभन्दा सहज तरीका
यदि तपाइँ जापानको यात्राको योजना गर्दै हुनुहुन्छतपाईंले जान्नुपर्दछ कि त्यहाँ एकचोटि, ट्रेन तपाईंको यातायातको उत्तम साधन हुनेछ। यो एक बाट अर्को ठाउँमा जानको लागि सबैभन्दा सहज तरीका हो। त्यसो भए, यदि हामीले यातायात छनौट गरिसकेका छौं भने अब हामीले जापान रेल पास पाउनु पर्छ।
यो टिकट हो जुन तपाईं जापानमा भएको सम्पूर्ण बृहत रेलवे नेटवर्क मार्फत यात्रा गर्न सक्नुहुनेछ। अवश्य पनि, त्यहाँ केहि अपवादहरू छन् जुन ज्ञात हुनुपर्दछ। तपाईको बारेमा जान्नु पर्ने सबै कुरा फेला पार्नुहोस् जापान रेल पास र प्रमुख घटनाहरू बिना यात्रा गर्न सक्षम हुनुको यो सरल तरिका पत्ता लगाउनुहोस्।
1 जापान रेल पास के हो?
2 मसँग कुन रेलहरू छन्?
3 म कहाँ जापान रेल पास किन्न सक्छु?
4 जापान रेल पास प्रकारहरू र मूल्यहरू
5 जापान रेल पास कसले पाउने छ?
6 के म सिट रिजर्व गर्न सक्छु?
7 के यो जापान रेल पास किन्न लायक छ?
जापान रेल पास के हो?
हामीले पहिले नै उल्लेख गरिसक्यौं, तथाकथित जापान रेल पास छ टिकटले तपाईंलाई जापानको रेल नेटवर्कमा पहुँच दिन्छ। हामी यसलाई एक प्रकारको पासको रूपमा परिभाषित गर्न सक्छौं। यसको साथ, हामी ट्रेनहरूको विशाल बहुमतहरू पहुँच गर्नेछौं जुन समूहका कम्पनीहरूले जेआर भनिन्छ।
मसँग कुन रेलहरू छन्?
हामीले उल्लेख गरिसकेका छौ कि तपाईसँग जापान रेल पास संग ट्रेनहरूको विशाल बहुमतमा पहुँच हुन सक्छ JR (जापान रेलवे) समूह भित्र पर्ने ती। केही तथाकथित उच्च-स्पीड रेलहरूमा कम। तपाईं Shinkansen पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ, Nozomi र Mizuho बाहेक।
अझै, एक महान लाभ यो हो कि तपाईं पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ टोक्यो यामानोटे रेखा। एउटा लाइन जो तपाईंलाई यस शहरका सबै मुख्य पोइन्टहरूमा छोड्नेछ। त्यहाँ स्थानीय जेआर बस लाइनहरू पनि उपलब्ध छन्, साथै जेआर मियाजीमा फेरी। तपाईं नरिता एक्सप्रेसमा पनि जान सक्नुहुन्छ जुन एयरपोर्ट क्षेत्र र टोकियोमा ठाउँहरूको भ्रमण गर्दछ।
म कहाँ जापान रेल पास किन्न सक्छु?
एउटा मुख्य प्रश्न थाहा पाउनु हो यस किसिमको टिकट किन्नुहोस्। यो जान्न धेरै महत्त्वपूर्ण छ कि जापानमा आउनु अघि यसलाई किन्नु सधैं राम्रो हुन्छ। किन, ठिकै छ, किनकि तपाईले जापानमा किन्नुभयो भने यसको मूल्य केही कम हुनेछ। अर्कोतर्फ, त्यहाँ एकचोटि त्यहाँ, यो केहि धेरै विशिष्ट स्टेशनहरूमा मात्र अवस्थित हुन्छ। त्यसोभए यो जोखिममा नपर्नु सधैं राम्रो हुन्छ।
यसलाई अनलाइन खरीद गर्नु नै तपाईंको उत्तम विकल्प हो। वेबसाइटले तपाईंलाई एक प्रकारको भाउचर पठाउनेछ जुन तपाईं जापानमा आइपुग्दा तपाईंले फिर्ता गर्नुपर्नेछ। यो यात्रा उत्तम हो तपाईको यात्रा को बारे मा तीन महीना पहिले। त्यहाँ एकचोटि, तपाईंले जेआर अफिसमा जानु पर्नेछ जुन तपाईं दुबै एयरपोर्ट र रेल स्टेशनहरूमा देख्नुहुनेछ। यो यहाँ हुनेछ जहाँ कुपन आदानप्रदान हुनेछ र तपाइँले कुन मितिमा यसको प्रयोग गर्नुहुनेछ भनेर भन्नुपर्नेछ।
जापान रेल पास प्रकारहरू र मूल्यहरू
तपाईंसँग of दिन बितिसक्यो, साथ साथै १7र २१। तिनीहरू मध्ये प्रत्येकमा तपाईं छनौट गर्न सक्नुहुनेछ यदि तपाईं हरित पास चाहानुहुन्छ जुन फर्स्ट क्लास वा टुरिस्ट वा दोस्रो क्लासको हुनेछ। यो भन्नु पर्छ कि रेलहरू भन्दा महान हो, अर्थव्यवस्था वर्ग सधैं सुविधाजनक छ। तपाईं एक सानो बचाउनुहुनेछ र तपाईं आराममा जानुहुनेछ। --दिन पर्यटक पासको लागत २१7युरो जति छ।
१ 14 दिन मध्ये एक, पर्यटकमा पनि, 348 21 यूरो र अन्तमा, यदि तपाईंले २१ दिनहरू छान्नुभयो भने तपाईंले 445 XNUMX यूरो तिर्नु पर्नेछ। ११ बर्ष उमेरका बच्चाहरूले आधा पैसा तिर्नेछ। हुनसक्छ यदि हामी उच्च मौसम वा छुट्टिहरूमा यात्रा गर्छौं भने, त्यस पछि थोरै पैसा तिर्ने र हाम्रो ठाउँमा आरक्षण सुरक्षित गर्ने छनौट गर्नु राम्रो हुन्छ। यदि, अर्कोतर्फ, तपाईं पहिलो वर्ग वा तथाकथित पास ग्रीन जानुहुन्छ भने, त्यसपछि मूल्यहरू अलिक फरक हुन्छ। --दिनको मूल्य २7१ यूरो छ। जबकि १ days दिन, 291 14२ युरो। अन्तमा, यदि तपाइँको प्रवास २१ यूरो हुन लागेको छ, तपाइँले 472१eयूरो तिर्नु पर्छ।
जापान रेल पास कसले पाउने छ?
यस मामला मा यो भनिनु पर्छ कि जापान रेल पास विदेशी यात्रुहरूका लागि हो। तर हो, पर्यटन उद्देश्यका लागि र ती जापानमा छोटो समय हो। यस तरिकाले, यो कुनै पनि प्रकारको विदेशी यात्रीका लागि अस्थायी आगन्तुकको रूपमा उपलब्ध छ। यद्यपि यस प्रकारको टिकट जापानी नागरिकताको लागि थिएन, यस वर्ष यो थोरै परिवर्तन भएको छ। यस्तो देखिन्छ कि यदि तिनीहरूले केहि कडा आवश्यकताहरूको सेट पूरा गरे, तिनीहरूले यसलाई पनि लाभ लिन सक्छन्।
के म सिट रिजर्व गर्न सक्छु?
धेरै एक्सप्रेस ट्रेनहरू छन् आरक्षण गर्न सकिने सिटहरू। यद्यपि स्थानीय ट्रेनहरूमा त्यहाँ कोही पनि छैनन्। सीट आरक्षण गर्न, यो सँधै महँगो पर्दछ, जब सम्म तपाईंसँग जापान रेल पास छैन। यस तरिकाले, यो पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र हुनेछ। सिट आरक्षित गर्नु अनिवार्य छैन, यद्यपि यदि तपाइँ लामो यात्रा गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भने यो बढी सुझाव दिइन्छ। समान स्टेशनहरूमा, तपाईंसँग अफिसहरू छन् जहाँ तपाईं आरक्षण गर्न सक्नुहुन्छ, किनकि यो सेवा अनलाइन उपलब्ध छैन।
के यो जापान रेल पास किन्न लायक छ?
यस टिकटको लागि लायक छ यदि हामी विभिन्न स्थानहरू खोज्न लाग्यौं भने। त्यो हो, यदि तपाईं केवल टोकियो वा माउन्ट फुजी क्षेत्र साथसाथ अन्य कतै जाँदै हुनुहुन्छ भने, यो अब यो लायक नहुन सक्छ। कुनै पनि भन्दा बढि किनभने ती निर्दिष्ट स्थानहरू हुन् जुन तपाईं एकल टिकटको लागि तिर्न सक्नुहुन्छ। जापान रेल पास यात्रा गर्न को लागी छ, धेरै विविध स्थानहरु को हेर्न को लागी सक्षम हुन र दिमागमा राख्नुहोस् कि हरेक दिन तपाईले आफ्नो गन्तव्य बदल्नुहुनेछ। यदि तपाईं रमाइलो गर्ने योजनामा ​​हुनुहुन्छ भने क्योटो, साथ साथै टोकियो, कोबे वा हिरोशिमा अरू माझमा, त्यसो हो भने यसले तपाईलाई क्षतिपूर्ति दिनेछ। तपाईं जापान रेल पास संग धेरै पैसा बचाउन जाँदै हुनुहुन्छ।
यदि तपाईं पहिले नै आफ्नो गन्तव्यको बारेमा स्पष्ट हुनुहुन्थ्यो, अब तपाईंलाई नयाँ प्रोत्साहन छ यसलाई राम्रोसँग जान्नको लागि। निस्सन्देह, जापान एक त्यस्तो क्षेत्र हो जहाँ धेरै आकर्षणको साथ अद्वितीय कुनाहरू छन् र पक्कै पनि, सम्झनाहरू जुन रमाईलोको साथ छन्। त्यसो भए, टिकटमा लगानी गरेर के गर्नु पर्ने यो भन्दा राम्रो तरीकाले हामीलाई यी सबै पहुँच गर्न अनुमति दिन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: Absolut यात्रा » जापान रेल पास, जापान मा यात्रा को लागी सबैभन्दा सहज तरीका
भोलेन्डम, परम्परागत माछा मार्ने गाउँ